March 6, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Xildhibaan Sheegay in aan Golaha Somaliland la Keenin Heshiiska DPW oo Dhamaystiran..Daawo
Posted on March 6, 2018 March 6, 2018 by Kaafi
https://www.youtube.com/watch?v=nH49tCvlUGg	Read More
Ileen madaxwaynaha Ruushku xariif ayuu ku yahay kubadda cagta (Vladimir Putin oo soo bandhigay xirfadiisa)
Posted on March 6, 2018 by Queen Kiin
Madaxwaynaha dalka martigalinaya koobka adduunka ee Vladimir Putin ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha loogu diyaar garoobayo dhacdada ugu wayn kubadda cagta. Vladimir Putin ayaa ka soo muuqday muuqaal uu baahiyay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo ay ugu talo galeen madaama koobka adduunka ay ka harsan tahay 100-maalin. Madaxwaynaha Ruushka ee Vladimir Putin iyo madaxwaynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa ka soo muuqday muuqaalka iyaga oo kubadd moolaysanaya. Putin ayaana lagu arkay xirfad…
Xildhibaan Dalxa oo shaaciyay cida mudan in looga dambeeyo la xisaabtanka Imaaraadka
Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa dhaliilay Siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee ku jira dowladda Federaalka ah oo sida uu sheegay sida joogtada ah uga hadlaya arrimaha Sharikadda DPWorld ee Dekadda Berbera la wareegtay. Xildhibaan Dhalxa oo ka mid ah Guddiga Dekadaha iyo Gaadiidka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka ka hadlaya arrintan ay aad u deg degayaan islamarkaana ay isbar baryaac ku hayaan xaaladda heshiiska Berbera. Prof:…
Kaddib heshiis aan Soomaaliya lagu marti soorin oo ay la gaareen qaar kamid ah maamullada dalka dowladda Imaaraadka ayaan isku dayi doonnaa in aan ugu yaraan ka hadalno saameynta uu yeelan karo heshiiskaas Soomaaliya:- Ra’iisul wasaarraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyrre ayaa gaashaanka u daruurray heshiiskaas, wuxuuna sheegay in uu yahay baaddil aysan dowladda waxba ka war qabin; waa saameyn inteeda la eg in Soomaaliya oo ka go’da talada dhulkeeda in marti ay ka noqoto heshiis…
Xildhibaan Zakariye:- “Itoobiya Iyo Imaaraadka Duulaan Ayay Ku Soo Qaadeen Somalia”
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiska Dekeda Berbera oo ay wada gaareen Somaliland, Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya. Xildhibaan Zakariye ayaa sheegay in dowladdaha Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya ay dagaal dhanka madax banaanida ah ku soo qaadeen Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in loo midoobo sidii go’aan cad oo dalka muhiim ah laga qaato Shirkada DP World oo uu sheegay…
Guddoomiyaha Baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo lagu dhisayo guriga baarlamaanka oo ku burburay dagaaladii sokeeye. Jawaari oo ka hadlayay barnaamij si toos ah uga baxayay talefishinka dowladda ee SNTV ayna kasoo qeybgaleen dad badan ayaa la weydiiyay sababta muddo sanooyin badan ah loo dhisi la’yahay. “Gurigaas waa guri sharaf leh magaciisa waxaa la yiraahdaa Golaha Ummadda wuxuuna mudan yahay inuu yeesho guri u dhigma meqaamkiisa oo magaalo madaxda…
Madaxwaynaha Soomaliya oo Khudbad Qiimo u jeediyay Ciidanka Xooga Dalka..Daawo
Posted on March 6, 2018 by Kaafi
https://www.youtube.com/watch?v=WSb6-tXBbPQ	Read More